Gị Asọmpi na-arụ ọrụ Na IoT Strategy ga-eli gị | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ na inntanetị na ụlọ m na ọfịs na-eto kwa ọnwa ọ bụla. Ihe niile anyị nwere ugbu a nwere ebumnuche pụtara ìhè - dị ka njikwa ọkụ, iwu olu, na thermostat mmemme. Agbanyeghị, njigide nke teknụzụ na-aga n'ihu na njikọta ha na-eweta ọgba aghara azụmahịa dịka anyị ahụtụbeghị mbụ.
N’oge na-adịbeghị anya, e zigara m otu Intanet nke Ihe: Digitize or Die: Gbanwee nzukọ gị. Nabata evolushọn dijitalụ. Bilie n'elu asọmpi ahụ, akwụkwọ nke Nicolas Windpassinger dere. Nicolas bụ Global Vice President nke Schneider Electric's EcoXpert Program Mmemme Mmekọ, onye ozi bụ jikọọ teknụzụ na nka nke ụwa na-eduga technology na-eweta, ịsụ ụzọ na-eme n'ọdịnihu nke nwere ọgụgụ isi ụlọ na Internet Ihe, ma nyefee ndị nwere ọgụgụ isi, arụmọrụ na arụmọrụ karịa na ngwọta ndị ahịa.
Dị ka akwụkwọ a na-enye aka na-akọwa, ụwa a na-ahụ anya na - emegharị - na - emekọ ihe ma na - emekọrịta ihe. N'ezie, azịza ya bụ mmalite nke njem gị: agụmakwụkwọ. Gụọ maka Blockchain na ọgụgụ isi dị ka ha ga-agbanwe ụwa. Nzọụkwụ gị ọzọ bụ n'eziokwu peeji ole na ole n'ihu; mee ka ha ghọta iwu egwuregwu IoT nke egwuregwu ma mụta otu esi eji ha maka elele gị. Don Tapscott, Onye edemede nke Wikinomics
Nicolas anaghị ekwu okwu naanị banyere ohere nke IoT, ọ na-ekwu n'ụzọ zuru ezu etu ọnụọgụ azụmahịa na enweghị enweghị teknụzụ nwere ike ịgbanwe site na atụmatụ IoT. Anyị na-na na niile na-agụ banyere ọgwụ na ahụ ike, n'ụlọ akpaaka, na ike ngwaọrụ… ma ihe banyere ihe ị ga-mgbe na-eche banyere. Lee ihe atụ ole na ole m hụrụ:
Panasonic Smart Isiokwu
O siri ike ikwere na ị ga-azụ ahịa maka tebụl n'ọdịnihu maka ike IoT o mana mgbe ịlechara vidiyo a, ị ga-agbanwe obi gị.
ZEEQ Smart Ohiri Isi
Wouldnye ga-echetụla ohiri isi ejikọtara - ya na okwu Bluetooth, nyocha nleba anya, na nyocha ụra. Ọfọn, ọ bụ ebe a…
Beer Production Sensọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme biya, olee otu ị ga - esi nyochaa usoro ịme biya iji kwado nkwekọ na njikwa?
Eziokwu bụ na IoT ga-anọ ebe niile yana ngwaahịa ọ bụla na ọrụ ọ bụla n'ọdịnihu. Nicolas'akwukwo bu ihe nlere anya nke ulo oru iji nyochaa onodu ha na oru ha iji chọpụta otu ntinye aka n'ime ihe ohuru nke IoT ga-esi gbanwee ahia ha. Ihe niile na-amalite na onye ahịa gị.
Digitize ma ọ bụ nwụọ jiri ndị na-eme mkpebi azụmaahịa na-eme n'ihu iji digitize atụmatụ ha, pọtụfoliyo, usoro azụmaahịa, na nzukọ ha. Akwụkwọ a na-akọwa ihe IoT bụ, mmetụta ya na nsonaazụ ya, yana otu esi eme ka mgbanwe dijitalụ baara gị uru. N'ime akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-amụta:
Ihe IoT pụtara na azụmaahịa niile
Ihe kpatara IoT na mgbanwe dijitalụ ji bụrụ ihe iyi egwu maka ụdị azụmaahịa gị na ịlanarị
Ihe ikwesiri ighota ka ighota nsogbu ya nke oma
Usoro IoT⁴ Strategic - Ihe anọ ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịgbaso iji gbanwee ọrụ ya iji lanarị
IoT ga - akpaghasị azụmaahịa niile, ndị isi ha gụnyere, ị nwere ike iji mgbanwe a mee ihe maka abamuru gị. IoT agbanweela ọtụtụ ahịa na ụlọ ọrụ. Senseghọta mgbanwe ndị a, na nke kachasị mkpa, ịghọta otu ị ga-esi mee ka ha too isi na ubu karịa asọmpi gị bụ otu ebumnuche nke akwụkwọ a.
Buyzụta Akwụkwọ - Digitize ma ọ bụ Die
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ mgbakwunye Amazon na post a.
Tags: mgbanwe dijitalụdigitize ma ọ bụ nwụọDon Tapscottinternet nke iheiotNicolas WindpassingerSchneider Electric's EcoXpert Mmemme MmemmeWikinomics